Amanye amadivayisi wokususa izinwele angashintsha umhlaba wakho - Izinto Ezisetshenziswayo
Amanye amadivayisi wokususa izinwele angashintsha umhlaba wakho
Some Hair Removal Devices That Can Change Your World
Ngabe uke waba isisulu samadivayisi okususa izinwele athembisa ukukushiya ungenazinwele futhi ubushelelezi, ngaphandle kwabo bonke lobo buhlungu, nangemizuzu emihlanu nje? Ngenkathi konke kungaba umqondo okhanga kakhulu, wonke amadivayisi awanikezi uhlobo lomphumela owufunayo, futhi angaholela ekuthini kube nicks, ukusikeka, izinhlanga, nokufakwa esikhundleni. Kungaba khona okuvela ukuthi kuhle impela, ngakho-ke nanka amadivayisi amahle wokususa izinwele athembisa ukuletha:
I-Philips Satinelle Advanced Wet & Dry Epilator
Isithombe: Instagram (@ lindokuhle_87)
Isihluthulelo sikagesi sikhipha izinwele ngokusebenzisa ama-disc amancane abamba i-follicle empandeni yawo. Le modeli futhi isebenza eshaweni eyenza kube nakho okunethezeka kakhulu nakho. Kungcono kunezinye izindlela zokuklama izinwele njengokucwebezela, ukuwaxisa noma ukushefa kepha okuyisiphazamiso ukuthi kungalimaza, kepha inqubo uqobo lwayo ayinangqondo futhi ilula njengokugunda.
Ukuthinta okungenasici kokuqeda
Isithombe: Instagram (@tangmagazine)
Isebenza njenge-epilator bg iyisusa ngokuhlanzekile thenga ngaphandle kobuhlungu ngokufika ezansi kwenwele ngalinye ngaphandle kwengozi yokuphinda ikhule ibe yimbi noma esheshayo.
Isazi se-Veet Sensitive Touch Electric Trimmer
Uma isikhumba sakho sizwela kakhulu ungazisika izinwele zakho zibe zide kakhulu, okuyindlela enhle yokuvimbela noma yiluphi uhlobo lwezinwele ezifakiwe ngenkathi ugcina izinto ziqoqekile. Inomvikeli wesikhumba ozoqinisekisa ukuthi ungasondela kakhulu esikhunjeni ngaphandle kokufaka ama-nick engozini. Amakhanda ahlukahlukene webhulashi amashiya akho kulayini wakho we-bikini kusho ukuthi udinga kuphela idivaysi eyodwa kuzo zonke izidingo zakho.
Tria Izinwele Ukususwa Laser 4x
Isithombe: Instagram (@sibusisiwe)
Le laser yasekhaya ezokwehlisa ukukhula kwezinwele nobuningi kakhulu. Kepha kudinga ukuthi izinwele nombala wesikhumba ziqhelelene ukuze i-laser ibambe umehluko.
Funda futhi: Ukususwa Kwezinwele: Izindlela Ezihlukile Zokukhipha Izinwele Zomzimba ezingafuneki
izinhlobo ze-yoga ezinamagama